राजकुमार ह्यारी–मेगन मर्केलः के दोहोरिँदै छ इतिहास ? | Ratopati
ससेक्सका ड्युक र डचेजले हालै ओप्रो विनफ्रीलाई एउटा एक्सक्लूसिभ अन्तरवार्तामा आफूले शाही परिवार छोड्नुको कारणबारे विस्तारपूर्वक बताए ।
कुनै बेला आधुनिक राजशाहीको प्रतिक ठानिएको शाही परिवारको ठाँटबाँटको जीवन छोडेर यो जोडी अमेरिका जानु बकिङ्घम प्यालेसका लागि झट्का ठानियो । तर यस्तो स्थिति किन निम्तियो ? यसको कारण के थियो ?
परी कथाजस्तो रोमान्सः
सन् २०१६ को अन्त्यमा प्रिन्स ह्यारी र अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल डेट गरिरहेका छन् भन्ने खबरले अत्यन्तै चर्चा पायो । मेगन त्यतिबेला टिभी ड्रामा ‘शूट्स’ मा आफ्नो भूमिकाका लागि परिचित हुन थालेकी थिइन् । यी दुईबीच परिचय एक साझा साथीले गराएका थिए । यो परिचयको १८ महिना भित्रै दुबैले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए ।
त्यसपछि यो जोडीको विषयमा मिडिया असाध्यै चनाखो भयो । उनीहरुलाई शाही घरानालाई हल्लाउने युवा जोडीको रुपमा हेर्न थालियो । मर्केल ग्ल्यामरस थिइन् । यो एक मुखर अन्तरजातीय जोडी थियो । दुबैको युवामा निकै प्रभाव थियो ।
आफ्नो इन्गेजमेन्टबारे घोषणा गर्दै ह्यारीले मेगनलाई भेटेको केही दिन पछि नै आफूले खोजिरहेको केटी मेगन नै हो भन्ने थाहा पाएको बताएका थिए । र सन् २०१८ मा जब प्रिन्स ह्यारी र मेगन मर्केलले विवाह गरे तब उनलाई हज्जारौं मानिसहरुले बधाई दिए ।
उनीहरुको विवाह बेलायतमा लगभग १ करोड ३० लाखले टिभीमा हेरे । थोरै समयका लागि यस्तो लाग्यो कि यो जोडी बेलायती जनता र प्रेसको प्रिय बन्यो ।
कुरा कसरी बिग्रियो ?
विवाह पछि मेगनको छवि अर्की शाही ग्ल्यामर गर्लको रुपमा बनाइन थाल्यो । बेलायतको टेबलोयड पत्रिकामा उनीबारे विभिन्न आर्टिकल छापिन थाले । यसमार्फत् उनलाई आफ्नो ‘पोलिस्ड लुक’ कसरी हासिल गर्ने भनेर टिप्स दिइन्थे ।
क्राउन क्रोनिकल्सकी एडिटर र पिआर एक्जेक्यूटिव विक्टोरिया हार्वर्ड भन्छिन्, ‘यो दोहोरिएको कुरा जस्तो लाग्छ तर थुप्रै मानिसहरुले यसलाई बेलायको शाही परिवारमा हुन लागेको एक नयाँ सुरुवातको रुपमा हेरे । शाही परिवारलाई सबैलाई समाहित गर्ने र उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व दिने परिवारको रुपमा हेरियो । यसकारण मात्रै होइन किनभने मेगन मिश्रित जातीकी थिइन्, उनी अमेरिकी र सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी महिला थिइन् ।’
‘सबैले यसलाई शानदार बताइरहेको थियो । मेगन मुखर र नारीवादी हुन् । मानिसहरुले निकै प्रशंसा गरिरहेका थिए । र यो जोडी निकै लोकप्रिय थियो । दुबैबाट बेलायतमा ठूलो आशा गरिएको थियो । ’
उनी भन्छिन्, ‘तर उनको इन्गेजमेन्ट अघि नै उनलाई टेबलोइटको तर्फबाट निशाना बनाइने संकेत पाउन थालिएको थियो । जब प्रिन्स ह्यारीले मेगनसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे पहिलो पटक सन् २०१९ मा पुष्टि गरे तब मिडियाको एउटा वर्गले उनीमाथि अचम्म प्रकारको हमला गरे । प्रिन्स ह्यारीले मिडियाको एउटा हिस्सामा मेगन मर्केलका लागि खराब शब्द प्रयोग गरेको र उनलाई प्रताडित गरेको आरोप लगाए ।’
प्रिन्स ह्यारीले मेगनविरुद्ध अभियानको एउटा लहर चलेको बताएका छन् ।
उनले भनिन्, ‘अपमान र प्रताडनाका केही घटना त खुल्लमखुल्ला भएको छ ।’
‘एक राष्ट्रिय पत्रिकाको पहिलो पानामा नै उनलाई तथानाम भनियो । यो विषयमा टिप्पणी गर्दै जे लेखिएको थियो त्यसमा जातीवादको गन्ध आइरहेको थियो । सोसल मिडियामा ट्रोलर्सले खुलेर मर्केलविरुद्ध घृणायुक्त अभियान चलाइरहेका थिए । इन्टरनेटमा टिप्पणी गर्ने लेखको पनि स्थिती यस्तै थियो ।’
हार्वर्ड भन्छिन्, ‘टेबलायट पत्रिकाको यस्तो व्यवहार असामान्य होइन । शाही परिवारमा संलग्न महिलाले यति धेरै मिडिया फोकसको सामना गर्नु कठिन हुनसक्छ । यहाँसम्म कि सन् २००७ मा प्रिन्स विलियम्स र केट मिडल्टनले आइसोलेसन रोज्नुको पछाडि मिडियाको घेराबन्दीलाई एउटा महत्वपूर्ण कारण मानिएको थियो ।’
‘शाही घरानाका महिला र टेबलोयड प्रेसको सम्बन्ध कहिले तितो त कहिले मिठो हुने गर्छ । शाही परिवारमा संलग्न हुने बेला प्रेसको व्यवहार उनीहरुप्रति निकै सकारात्मक रहन्छ । उनीहरुमाथि निकै साधारण स्टोरी लेखिन्छन् । उदाहरणका लागि उनीहरु कस्ता क्रिम प्रयोग गर्छन् ? आदि इत्यादि । एक वर्षपछि उनीहरुलाई लाग्छ कि तारिफको चास्नीमा डुबेको यस्ता प्रकारको कहानीले अब मानिसहरुलाई बोर बनाइरहेको छ । त्यसैले महिलाका साथी र पूर्व सहकर्मी गरेर उनीहरुबारे नकारात्मक कुराकानी लेख्न थालिन्छ । त्यसपछि बिस्तारै नकारात्मक कहानी छाप्न सुरु हुन्छन् ।’
प्रिन्स ह्यारीको बयानबाट स्पष्ट भइसकेको थियो कि उनी मेगनमाथि हुने यस्तो हमलालाई सहने छैनन् । यो जोडी शाही परिवारबाट निस्किएपछि प्रिन्सले भनेका थिए, ‘बेलायतमा प्रेसले जुन विषालु माहौल बनाएको छ, त्यसबाट बच्नका लागि हामीहरुले यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’
याहूको न्यूज साइटका लागि शाही परिवारको भ्रमणबारे लेखिसकेकी पत्रकार जेसिका मोर्गन भन्छिन्, ‘ह्यारीले आफ्नी आमालाई प्रेसले गरेको व्यवहार देखिसकेका थिए र उनी आफ्नी श्रीमतीमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार होस् भन्ने चाहँदैनथे ।’
उनी भन्छिन्, ‘डायना मुखर थिइन् । उनी आफ्नो आवाज बलियो बनाउने गर्थिन् । उनलाई कसैले चुप गराएको उनलाई मन पर्दैनथ्यो । यो मामिलामा मेगन र डायनामा समानता छ । मेगन गोरी पनि छैनन् ।’
के इतिहास दोहोरिँदैछ ?
जब लेडी डायना स्पेन्सर शाही परिवारमा आएकी थिइन् तब प्रेसको प्रतिक्रिया निकै सकारात्मक थियो । यस्तै मेगनसँग पनि भएको थियो ।
हार्वर्ड भन्छिन्, ‘सुरुमा डायनाले असाध्यै प्रेम पाइन् । उनी युवा थिइन् । उनी कुलिन थिइन् र सुन्दर पनि । डायना निकै लोकप्रिय थिइन् र यस्तो लाग्थ्यो कि उनलाई कसैले केही गलत गर्नै सक्दैनन् ।’
तर श्रीमान् चार्ल्ससँग सम्बन्धविच्छेद पछि पपराजीले डायनाको हात धोएर पछि लागे । सन् १९९३ मा जब एक पपराजी उनको पछि लागे तब उनले चिच्याएर भनिन्, ‘तिमीहरुले मेरो जीवन नर्क बनाइदिएका छौ ।’
जिममा व्यायाम गरिरहेका बेला उनको तस्बिर खिचिन्थे । पार्टनर डोडी अल फयादसँग खिचिएको उनको एउटा तस्बिर १० लाख डलरमा बेचिएको थियो पनि भनिन्छ ।
प्रेसले डायनाको अत्यधिक पिछा गरे र अन्त्यमा पपराजीसँग बच्ने कोसिसमा पेरिसको एउटा सुरुङबाट यात्रा गर्ने क्रममा उनको कार दुर्घटनाग्रस्त भयो र उक्त दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो ।
यो घटना डायनाका छोरा र प्रेसबीचको प्रेमपूर्ण र घउणायुक्त सम्बन्धको सुरुवात थियो । पहिलो पटक उनले आफ्नी आमाको जीवनमा मिडियाको लगातार घुसपेठको भयानक नतिजा देखेका थिए ।
एक निर्मम अभियानः
राजगद्दीका उत्तराधिकारीका छोराको रुपमा प्रिन्स ह्यारीको जीवनमा लगातार प्रेसको नजर रहेको छ । उनकी जीवनसाथीको जीवन पनि यसबाट अछुतो रहन मुश्किल थियो ।
तर टेबलोयडको ध्यान मेगनको सम्बन्धविच्छेद, पारिवारिक जीवन, विवाहअघिको करियर र रङ्गमा केन्द्रीत भयो ।
मेल अनलाइनमा छापिएको एक सुरुवाती लेखमा उनीबारे गलत जानकारी दिइयो ।
उनलाई लस एन्जेल्सको एउटा यस्तो इलाकामा हुर्किएको बताइयो जुन ग्याङ्ग–अपराधसँग जोडिएको थियो जबकी उनको बाल्यकालको धेरैजसो समय हलिउड वरिपरि बितेको थियो र यहाँकै एउटा नीजि विद्यालयमा उनले पढेकी थिइन् । यसकै अर्को एउटा आर्टिकलमा उनकी आमालाई लस एन्जेल्समा बस्ने घुम्रिएको कपाल र खराब ब्याकग्राउन्डकी अफ्रिकी अमेरिकी महिला बताइयो । मेगनमा ‘एग्जोटिक डीएनए’ भएको बताइयो ।
मर्गनले भनिन्, ‘जब मेगन शाही परिवारमा आइन् तब सुरुवाती माहौल निकै सकारात्मक थियो । मानिसहरु खुसी थिए । तर माहौल चाँडै नै नकारात्म भइदियो । प्रेसले अलि बढी नै जातीय कुराहरु कोट्याउन थाल्यो ।’
मर्गन भन्छिन्, ‘यस्तो लाग्यो कि कालामाथि हमला भइरहेको छ । ममाथि नै नीजि हमला भइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो । हामी जसलाई प्रेम गर्छौं र जसलाई रुचाउँछौं, उनीमाथि हमला भइरहेको छ । अमेरिकामा एक अश्वेत महिलाको रुपमा बसेका कारण मलाई थाहा छ कि जातीवाद के हो । हामीलाई जतिबेला पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । यहाँ हामीबारे यस्तै कुरा गरिन्छ ।’
डचेज अर्थात् मेगनबारे विभिन्न प्रकारका कुरा गरिए ।
जस्तै कि उनलाई ‘हठी’, ‘दखल दिने’ र ‘घमण्डी’ बताइयो । यहाँसम्म कि उनले आफ्ना दुई नीजि सहायकलाई केनिन्स्टन प्यालेसबाट भगाइदिएको पनि बताइयो । मेगनले यसको खण्डन गर्दै यसलाई उनले आफ्नो चरित्रमाथि गरिएको नयाँ हमला बताइन् । बकिङ्घम प्यालेसले यो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर अनलाइन टिप्पणीकारहरुले टेबलोयड पत्रिकाले मेगनको तुलनामा प्रिन्स विलियम्सकी श्रीमती अर्थात् डचेज अफ केम्ब्रिजबारे कस्तो रिपोर्टिङ गरेका छन् भनेर देखाइदिए ।
डेली एक्सप्रेसको सन् २०१९ को जनवरीको एउटा लेखमा एभोकाडोप्रति मेगनको प्रेमलाई सुख्खा र हत्यासँग जोडियो जबकी १५ महिना अघि डेली एक्सप्रेसले नै एउटा आर्टिकलमा केट मिडल्टनले आफ्नो मर्निङ सिकनेसबाट राहत पाउनका लागि एभोकाडो खान्छिन् भनेर लेखेको थियो ।
मर्गन भन्छिन्, ‘अन्तर नस्लीय मुद्दाको मामिलामा महिला अझ त्यसमाथि पनि सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुको अर्थ यो हो कि तपाईं कडा निगरानीको दायरामा हुनुहुन्छ । यदि तपाईं महिला हुनुहुन्छ र अश्वेत हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाईंमाथि थप कडा निगरानी हुनेछ किनभने महिलाले निकै उच्च मूल्यको परीक्षामा कस्ने गरिन्छ । अश्वेत महिला असाधारण हुनुपर्छ ।’
‘जब केटले तोड्थिन् तब उनीहरुले ‘उनले सिकिरहेकी छिन्’ भन्थे तर जब मेगन आफैंले कारको ढोका बन्द गर्थित् तब यो निकै ठूलो स्टोरी बन्ने गर्दथ्यो । यो सिस्टम र संस्थाको मुद्दा हो । ’
आफ्नो र मेगनबारे लगातारको समाचारका कारण चिन्तित भएर ह्यारीले सन् २०१९ अक्टोबरमा बेलायती टेबलोयडको आलोचना गर्दै एक बयान जारी गरे । उनीहरुले यी टेबलोयडले उनकी श्रीमतीविरुद्ध प्रोपोगान्डाको निर्मम अभियान चलाइरहेको छ । त्यसपछि अप्रिलमा यो शाही जोडीले आफूहरुले डेली मिरर, द डेली मेल र डेली एक्सप्रेससमेत केही थप प्रकाशनसँग कुरा नगर्ने बताएका थिए ।
हवर्ड भन्छिन्, ‘केही टेबलोयडको धारणा एकतर्फी रह्यो । उनीहरु मेगनमाथि फोकस गर्छन् । उनीहरुलाई थाहा छ कि यसले उनीहरुलाई रुष्ट पार्नेछ । उनीहरुलाई थाहा छ कि यस्ता स्टोरी पढिन्छन् । यसमा अत्यधिक कमेन्ट आउने गर्छन् । यस्ता समाचार नै बढी सेयर गरिन्छन् ।’
#britain#meghan markle#kate middleton#harry